Mobile Vhidhiyo Ads Ari Nezve Iyo Nyaya Pasina Iyo Kutengesa | Martech Zone
Google chete yakaburitsa zvabuda muedzo mutsva izvo zvinoyevedza uye zvinofanirwa kutariswa nemunhu wese anotarisa kuti awedzere vhidhiyo yake kusvika kune nhare mbozha. Zvichitaurwa zviri nyore, iyo iri kumeso kwako kushambadzira modhi yezuro chete haishande pane yedu nhare mbozha.
Kushanda neMakomo Dova, BBDO yakaburitsa mavhidhiyo matatu akasiyana. Yekutanga yaive yekuisa terevhizheni kushambadza pane nhare mbozha. Yechipiri yaive yekukanda kushambadzira kuiswa ipapo kune vanoona nhare vaizodonha. Vhidhiyo yechitatu haina kusundira chigadzirwa, asi iyo nyaya, zvichikonzera 26% yevaoni vanoona uchiona vhidhiyo uye vanopfuura hafu yavo vachirangarira mhando.
Kana izvi zvisingaite kunge zvinoshamisa ... ramba uchifunga kuti kechitatu cheyedzo Masekonzi 30 kureba kupfuura vamwe vaviri!
Mikana mitatu Akawanikwa neYedzo
Izvo zvisingatarisirwi zvinogona kunge zvine simba. Vanhu vachagara newe.
Tora nguva yenyaya yako. Usangopamha muchiratidzo chako vasati vadarika.
Izvo hazvidi kutaridzika seye kushambadza kufambisa yako brand.
"Yekutanga" yakashanda sekutonga mukuyedza kweGoogle. Inzvimbo yemasekondi makumi matatu inotarisa vakomana vatatu vanotora Mountain Dew Kickstart, vanotanga kutamba, uye zvese zviri pasi pevhu - kubva pachigaro chakazara pamusoro pembwa - chinopinda. Ipapo vakomana vanoenda kune chero chinotevera.
Iyo Huru Punch
Iyi 31-yechipiri nharembozha yekushambadzira inotanga nehukuru, hwakashinga chigadzirwa kupfura uye kuverenga, zvichiratidza kuti chimwe chinhu chinotonhorera chave kuda kuitika. Vataridzi vanobva vadonhedzwa nepakati pechiito uye nyaya yacho inopetenuka kubva ipapo.
Iyo "Kunakidzwa Kwakachena" inodzokorora kudonhedza vaoni pakati pechiito pasina mimhanzi kana chero pfungwa chaiyo yezviri kuitika. Ipapo mimhanzi inokanda mukati uye kushambadzira kunoratidza akasiyana matambiro zvinhu. Yakareba kwenguva refu kupfuura yekutanga kushambadza paminiti imwe, makumi matatu nemasere.
Tags: bbdogoogle adsGoogle +nharembozha yevhidhiyomobile vhidhiyo kushambadziradova regomo